Wazi Njani xa Inja yakho sele iza kuzala? - Izinja Imiboniso Yesilayidi
Malunga Iindawo Zokungcakaza Ne Memorials
Wazi Njani xa Inja yakho sele iza kuzala?
Ukutyikitya inja kuya kungena emsebenzi kungekudala
Inja yakho ikhulelwemalunga neentsuku ezingama-63kwaye unokumaziumhla osikiweyo, kodwa ukubanakho ukuqonda xa sele eza kuzala kunokukunceda ubekhona kuye xa efuna kakhulu. Kuninzi okwenzekayo ngexeshaukumithaphambi kokuba inja izale. Uzakufuna ukubukela iimpawu ezimbalwa ezilula ukuba inja yakho iya kubasebenzi kungekudala, njengokuziphatha kwendlwana, ukulahleka kwesidlo, ukukhawuleza, kunye nokunye. Kwaye enye indlela yokubikezela umlilo inokukunceda ubone ukuba inja yakho iza kusebenza nini.
Ukwehla kwamaqondo obushushu kuqikelela umsebenzi
Ukugcina itshathi yemihla ngemihla yenqanaba lokushisa kwenja yakho ngeveki yokugqibela yokukhulelwa kunokukunceda ubone ukuba uza kuqala nini umsebenzi. Ubushushu obuqhelekileyo benja buphakathi kwe-100 kunye ne-101 degrees Fahrenheit. Phambi kokusebenza, iqondo lobushushu liyehla liye kuma malunga nama-97 degrees kwaye lihlala liphantsi ngokufundwa kabini ngokulandelelana kuthathwe iiyure ezili-12 ukwahlukana.
Unokubona amanye amaqondo obushushu okwexeshana, kodwa ukufundwa kabini ngokulandelelana kobushushu obusezantsi yile nto uyifunayo. Nje ukuba oku kwenzeke, umsebenzi uza kuqala zingaphelanga iiyure ezingama-24. Olu lolona phawu luchanekileyo inja yakho iya kubasebenzi.
Ukuziphatha kweNesting luphawu lweNja yezabaSebenzi
Ukuziphatha kwendaloOlunye uphawu lomsebenzi luza kuqala kungekudala kuba izinja zifuna indawo ekhuselekileyo yokuhambisa amantshontsho azo. Ukumnceda, unokubonelela nge-ibhokisi esezantsiezele liphepha neengubo. Inja yakho iyakuyinyibilikisa le bhedi kwindlwana yexeshana ukulungiselelawhelping.
Lo msebenzi uhlala uqala malunga neveki ngaphambi komhla omiselweyo, kodwa inja yakho iya kuqala ngokuluka usuku okanye ngaphambi kokuhanjiswa. Lo mfanekiso ubonakalisa umama kunye namantshontsho kwiUncedo olufanelekileyog okusingqongileyo.
Ukuphulukana nokutya kunye nokuGabha kwangaphambili kwabasebenzi
Kwiimeko ezininzi, ainja emithi izakuyeka ukutyausuku okanye ezimbini phambi kokuba aye kubeleka. Nokuba uyatya, usenokuphosa kwinqanaba lokuqala kokubeleka. Kananjalo uya kuba nokuhamba kwamathumbu amakhulu ngaphakathi kweeyure ezingama-24 zokuya kubasebenzi ngenxa yoxinzelelo lwabantwana njengoko besiya kwindawo yokuzalwa.
Ukuveliswa kobisi luphawu lokuqala
Ayizizo zonke iimazi eziza kubisi ngaphambi kokuba zihambise amantshontsho azo, kodwa ezinye ziyafika. Jonga iingono ezandisiweyo kunye namabele adumbileyo. Usenokude uqaphele ukuvuza okuncinci ngaphambi kokuba kuqalwe umsebenzi. Kwizinja ezithile, olu luphawu olulungileyo lokwazisa ukuba abasebenzi bayeza. Nangona kunjalo, unikwe uluhlu lwexesha elinokuthatha ukuba inja iqale ukuncancisa ngaphambi kokubeleka, olu lolunye lweempawu ezinzima ukusisebenzisa.
Izenzo zeLethargic kwaye zidiniwe
Amabhinqa amaninzi achitha ixesha elininzi ephumle ngaphambi kokubeleka kuba ethwele inkunkuma ithatha amandla amaninzi, ngakumbi kwezo ntsuku zokugqibela ngaphambi kokuhanjiswa. Ukuba isilwanyana sakho sibonakala sibuhlungu ngakumbi kunangaphambili okanye kusuku olunye okanye ezimbini ezidlulileyo kwaye sisondele kumhla wakhe ofanelekileyo, kunokuba ngumqondiso wokuba umsebenzi uza kuqala.
Ixhala kunye nokungazinzi Zizimpawu eziKhulu zabasebenzi
IxhalaUmsebenzi ozayo unokunika inja yakho inkxalabo xa isiva ukuba ixesha lokuhambisa lisondele. Ungabona ukuba ukhupha iiflegi zakhe, kwaye namehlo akhe angankcenkceshela kancinane. Unokuphinda azincamathele ecaleni lakho kwaye angafuni ukukuyeka ngaphandle kwamehlo akhe xa esiva ukuba umsebenzi uza kuqala. Enye yeendlela ezilungileyo zokunceda inja yakho xa izala kukuba lapho kunye nothando nenkuthazo.
Ukukhefuzela luphawu lokuba inja isemsebenzini
Ungayixelela njani xa inja yakho isemsebenzini? Inja ekhulelweyoukukhefuzelangelixa ukuphumla phantse kungumqondiso othile wokuba umsebenzi uqalile. Inja yakho iya kukhawuleza ngokukhawuleza kwaye emva koko ime kancinci okwexeshana ukuqala kwakhona.
Ukuqhaqhazela kunye nokuchasana kubonisa ukuba inja yakho iseMsebenzini
Ukuqala kokungcangcazela kuhlala kubonisa ubushushu bomfazi obonyukayo. Okwangoku, unokuthi uqaphele ukuba isisu sakhe sixinekile okanye siqhume ngamanye amaxesha ngamanqindi. Xa ubona le miqondiso, ngobunono ubeke izandla zakho ngapha nangapha kwesisu sakhe. Isisu sakhe siya kuziva sinzima ngexesha lokuncipha, kwaye uya kuziva uphumle kwakhona wakuba isivumelwano siphelile.
Ihlala ixesha elingakanani inja isebenza? Inokwahluka kancinci kuxhomekeke kwibhokhwe nganye, kodwa eli nqanaba lokuqala lomsebenzi wenja ihlala iiyure ezimbini ukuya kwezintathu ngaphambi kokuba iqale ukutyhala intshontsho lokuqala, kwaye inokufuna ukusondela kakhulu kuwe kude kufike ixesha lokuqala. .
Ngokuqinisekileyo uya kuyazi ukuba inja yakho isebenza nzima xa iqala ukutyhala. Ezinye izinja ziya kulala phantsi njengoko ziqala ukutyhala intshontsho ngelixa ezinye ziya kutyibilika kuyo yomine imilenze ngokungathi zizama ukudlula isitulo. Umfazi uya kugxila ekutyhaleni kwaye ahlawule kancinci kuyo nayiphi na into eyenzekayo macala onke kuye. Akufanele uzame ukumnceda ukuba abelethe, kodwa ukuba uqaphela nayiphi na imiqondiso yoxinzelelo, biza ugqirha wezilwanyana.
Ukuvela kweAmniotic Sac
Ingxowa ye-amniotic egcwele ulwelo iqala ukuphuma kwi-vulva njengoko intshontsho liqala ukwenza indlela yalo kumjelo wokuzalwa. Ingathatha ukutyhalwa okuninzi ngaphambi kokuba intsholongwane kunye neplacenta yayo ihanjiswe ngokupheleleyo. Ngamanye amaxesha i-placenta igcinwa, kodwa ihlala ikhutshelwa ngaphandle ngaphambi kokufika komntwana olandelayo.
Oku kuzisa umba wokuba uza kulibona nini na ixesha lokuphuma kwamanzi. Ngamanye amaxesha ingxowa iya kuphuka njengoko ivela kwilungu lobufazi. Ungalindela ukuhanjiswa kwimizuzu okanye kwimizuzwana yoku kusenzeka. Ngamanye amaxesha injana isesengxoweni emva kokubeleka, kwaye umama uyayihlafuna ingxowa ukuyivula. Oku kukhupha ulwelo, emva koko umama uya kucoca ubuso bomntwana kwaye abukhuthaze ukuba uqale ukuphefumla. Ukuba ubona i-bitch iyopha kancinci ngeli xesha, yinto yendalo leyo.
Izinja azopheli igazi ngaphambi komsebenzi ngaphandle kokuba kukho uhlobo oluthile lwengxaki efana nokwahlulwa ngaphambi kwexesha kwesingxobo esibelekweni, kodwa ayiqhelekanga into yokuba inja ifumane iinyembezi ezincinci xa ikhupha intshontsho lokuqala. Uninzi lweenyembezi luyaziphilisa ngokukhawuleza emva kokuba inkunkuma ihanjisiwe.
Kuba akukho ndlela yokwazi ukuba zingaphi iinjana zakho ezinokuba nazo ngaphandle kwe-ultrasound evela kugqirha wezilwanyana, linda ke xa ufika. Inkqubo yokutyhala kunyeukuhambisaiyakuphinda injana nganye de kuzalwe inkunkuma yonke.
Inja yakho inokuphumla okwemizuzu embalwa okanye iyure okanye njalo phakathi kokuzalwa, kwaye uyazi ukuba inja elandelayo isendleleni xa iqala ukukhefuzela nokutyhala.
Imizekelo yeengxaki zezabaSebenzi beNja
Iingxaki zabasebenzi zinokwenzeka nanini na ngexesha lenkqubo. Ngamanye amaxesha intshontsho liyabambeka kwinxalenye yokuphuma kumsele wokuzalwa, kwaye kuyimfuneko ukuba uyiqonde ngetawuli kwaye uyitsale ngobunono ngexesha lokurhoxa okulandelayo ukuze uncede. Ukuba kukwaphula umthetho ukuzalwa apho intloko iyinxalenye yokugqibela ukuvela, kuya kufuneka ulumke ngakumbi kuba kunokuba lukhulu kakhulu ukuba ungadlula kwi-pelvis. Ungenelelo lwezilwanyana olukhawulezayo luyafuneka kwimeko enje.
Ngamanye amaxesha, i-bitch iyeka ukusebenza ngokupheleleyo, kwaye akukho nto unokuyenza okanye uyenze ngokwakho ukuzama ukunyanzela abasebenzi. Lo ngomnye umzekelo apho kuya kufuneka ubize ugqirha wezilwanyana kwaye uthathe intsholongwane uyise ekliniki. Ugqirha wezilwanyana unokulawula i-oxytocin ukukhuthaza ukubetheka kwesibeleko, kodwa kunokuba yimfuneko ukuhambisa amantshontsho ngecandelo le-C ukuba umsebenzi usasilela ukuqhubela phambili.
Nje ukuba inja yakho ihambise lo mntwana wokugqibela, uya kuyenzahlala phantsi kwaye uqalise ukukhathalela inkunkuma yakhe. Ukuba inja yakho ibinokuhanjiswa kwendalo ekhaya, kuya kufuneka ubize ugqirha wezilwanyana kwaye umngenise kuvavanyo lwasemva kokukhulelwa ukuze uqiniseke ukuba isibeleko sakhe ngoku asinalutho. Nje ukuba kufezekisiwe, ngumsebenzi wakho ukukhathalela iimfuno zakhe kwaye umvumele ukuba alawuleiintsana ezisandul 'ukuzalwakunye nokuphazamiseka okuncinci kangangoko kwiveki yokuqala. Ukuba konke kuhamba kakuhle, uya kuba nenkunkuma eyonwabileyo kwaye esempilweni.
Umgangatho Iimbono Iinkampani Zemortgage C Ulusu Care Kanye Nonyango Amaqela Amaqela Safe Pranks And Practical Jokes
Iifree Bantwana's Iincwadi
Iimpahla Zokwenza Ekhaya
Elektroniki Ne Izixhobo
Autism Kanye Bantwana
lihamba kweliphi icala inquma lam?
ungaxelela njani ukuba ingxowa ye-chanel yeediliya iyinyani
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba inja ibonise iimpawu zokukhulelwa?
yenza i-geminis kunye ne-capricorn
amazwi entuthuzelo emva kokufa
Nkulu Njengendoda Mnyama Impahla